Akụkụ abụọ nke otu mkpụrụ ego | Akụkọ akụrụngwa
Mundi Videogames | | Ihe omume
Ọ bụ ihe nkịtị na mgbe ihe omume mgbasa ozi fesara na trailers ọhụrụ na ọkwa, netwọkụ mmekọrịta, ọgbakọ na ngalaba nkọwa nke isi egwuregwu egwuregwu vidio na-achịkọta ọtụtụ puku okwu na ihe niile egosiri na, dịka na ihe niile, ọ naghị esiri ike ịchọta echiche n'eleghị mmadụ anya n'ihu Nke ahụ na - eduga na mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka a ga - asị na ị na - arụ ụka banyere bọọlụ mara mma na esemokwu ma ọ bụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nke mbụ, ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ ga-eju m anya na n'akụkụ a na fim a ka nwere ọtụtụ ndị mechiri emechi ịhapụ otu "ikpo okwu" ha ma, na-aga n'ihu, akwụsịla ịkatọ mmegharị ọ bụla nke asọmpi ahụ.
N'okwu a, ihe m bu n'uche ịtụgharị uche bụ obere fanatical mana lekwasịrị anya na oké agbachitere egwuregwu si X ụlọ ọrụ site nanị eziokwu nke launching na console na otu onye nwere. Na-eme ka o doo anya na nke a dị m ka ọ bụ omume ụmụaka na ụdị nke "ihe m bụ nke kachasị mma na ihe na-abụghị maka gị", ọ na-eju m anya na mmeghachi omume izugbe banyere ihe egosiri na egwuregwu dị ka Akụkọ banyere Zelda na Ọ dịghị mmadụ si n’eluigwe, inye ihe atụ abụọ. Banyere nke mbụ, echeghị m na ngosi ọ bụla dị mkpa, gbasara nke abụọ na-ekwu na ọ bụ isiokwu siri ike site na British Hello Games nke a na-akpọ ka ọ bụrụ naanị nwa oge na Playstation 4 ka ọ gwụ, ma ọ dịkarịa ala, PC.
Mpempe akwụkwọ egwuregwu egosiri site na The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda Ọ bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke mmemme ahụ n'ụtụtụ a mana ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na ihe egosipụtara nwere chiaroscuro ya. N'otu aka, ọ dị ka ụzọ nka esighị n'ụdị dị iche iche dịka ikuku Waker, mana ọ dị ka mmalite ezi uche dị na ihe na-adọrọ adọrọ nke ihe a hụrụ na mma agha Skyward. O doro anya na ụwa mepere emepe dị ka ekwere na nha nke maapụ, ọbụlagodi ọnwa iri na abụọ mgbe e mechara ya, na-arụtụ aka n'ọtụtụ ụzọ. Ma ọ dị onye ọ bụla na-echeta snippet nke, m na-ekwu, "ezigbo oge egwuregwu" nke egosiri na E12 ikpeazụ? Site na ihe egosiri ọnwa isii gara aga na nke a hụrụ ụnyaahụ enwere mbelata nke ukwuu n'ihe gbasara ahịhịa na mkpokọta izugbe, dị oke egwu. Na nke a, na-abata tupu okwu nke Eiji Aonuma, na-ekwuwapụta ọnwa ole na ole gara aga na egwuregwu ahụ dị mma karịa E3, anaghị akwụsị ihe ijuanya.
Ọ bụrụ na anyị ga-Ubisoft ma ọ bụ EA, osimiri nke ink na karịa doro anya mebie Ha agaraghị ele ogologo oge iji hụ ìhè mana, na nke a, ọ ka mma "ichere maka egwuregwu ikpeazụ" ma ọ bụ, ada ada nke ahụ, maka E3 na-esote ebe ha gosipụtara ụgbọala na-adọkpụ na-eru nso na steeti ikpeazụ. Ọ tụrụ m n'anya na nchedo nchedo a bụ ntakịrị karịa na-eme ka o doo anya na, ọ bụrụ na ọ ka mma, mmadụ nwere ike ikwu banyere Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda ihe niile ịchọrọ, dịka e mere mgbe E3 gasịrị, mana ọ bụrụ na ọ bụ maka ihe ọjọọ, otu na-adaba n'ime ya.hiehie nke ikwu okwu tupu oge eruo ma na-echeghị ịhụ nsonaazụ ikpeazụ. Echere m na mgbe ngosipụta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji ise nke Nintendo n'onwe ya họọrọ ma dezie, onye ọ bụla n'ime anyị nwere ikike ikwu, ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ, nke ihe anyị hụworo. Na ihe a hụrụ na-egosi a egwu ndakpọ nke ọma nke, ee, abụghị nchegbu m kachasị ukwuu. N'akụkụ a, enwere m obi erughị ala banyere nke a ụwa zuru oke, ụwa dị larịị, enweghị ndụ nke ahụ na-eme ka a hụ ya na nke ahụ, n'agbanyeghị otu o buru ibu, ọ naghị akpọ nyocha ma ọlị. Anyị maara na Nintendo bụ nna ukwu na-eke ọhụụ mana anyị enweghị ihe atụ nke ha na-eke ụwa dị mgbagwoju anya, dịgasị iche iche juputara na ọdịnaya na isi nke mmasị. Echere m na nchegbu dị n'ihu ihe a na-ahụ bụ, ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma nwee nghọta.
Ọ dịkarịa ala otu afọ fọdụrụ, ọnụ ụlọ maka imeziwanye buru ibu, Chọpụta. Mana oburu na egosiputara ihe egosiri, Aonuma na-enye onwe ya ohere itu ọnụ banyere ụwa okike, mmetụta ahụ adịchaghị mma. Ihe ndekọ ha na egwuregwu ndị gara aga na-enye ha, n'ezie, uru nke obi abụọ na ọ siri ike iche banyere Zelda ọjọọ na ihe ị ga-atụ anya ya. Mana, n'ezie, dịka anyị dị obere mgbe egosiri na E3, anyị tozuru oke ịza ajụjụ n'ihe a hụrụ.
Onye ọ kachasị sie ike ịrapara na ndekọ ya bụ ụmụ nwoke Ndewo Egwuregwu na mgbe ọtụtụ obere nke ihe dị egwu Joe Danger saga, ha na-awụli elu na otu n'ime ọrụ indie kachasị nwee mmasị na-echeta ya Ọ dịghị mmadụ Sky. Akaebe na ngosi site Sean Murray kwuru, onye mmebe egwuregwu, n'oge VGX gara aga, ha jere ozi ịkọ oghere n'ime obere obi anyị n'ihi oke agụụ a nke ọ tụpụrụ n'okwu ọ bụla ya na ụjọ ahụ nke onye na-elekwasị anya na ịmepụta na ọ bụghị na-ekwu okwu ma ọ bụ na-eme mkpọtụ. Nke ahụ, yana ahụmịhe akpọrọ ka imepụta ihe ọhụụ ma nye anyị nnwere onwe karịrị akarị, mere No Man Sky ka ọ gaa ihu ihu nke egwuregwu vidiyo na nke ahụ, ọzọkwa, e mepụtara akwa nchekwa dịtụ ya gburugburu, n'ihi, na akụkụ, nke ahụ oge nke Sony na PlayStation 4
Nke ahụ bụ kpọmkwem otu afọ gara aga. Taa, ọnwa 12 ka e mesịrị, Anyị ahụla ọtụtụ nke igwe mmadụ ọ bụla mana, n'ime ala, anyị akwụsịbeghị ịhụ otu ihe ahụ. Ee, anyị na-ekwu maka ihe gbasara mbara igwe na-enweghị ngwụcha na nhazi nke sitere na teknụzụ mgbakọ na mwepụ nke ọkwa kachasị elu. Ma gịnị mere na ị gaghị akụziri anyị ihe karịrị nanị ịwagharị na mbara ala ndị nwere ọmarịcha ma doo anya nke ga-eme Ọ dịghị Sky nke mmadụ? Gịnị ma ị banye n'ime usoro ọgụ ọgụ? Gịnị ma ị lee anya na interface nke anyị ga-eji ọtụtụ awa na awa? Mba, ọ ka mma iburu ụdọ ọzọ dị ka nke mere n’oge gara aga E3, ọ mere na Gamescom ma ọ bụ na ọ mere na VGX nke 2013. Mana, lee ihe kacha njọ, na-agbakwunye a oyi akwa nke na-agbapụ ikwubiga okwu ókè nke ahụ na-eme ka ahịhịa na ihe osise dị iche iche na-egosi na centimeters ole na ole site n'àgwà anyị, na-akpata, maka m, otu n'ime nrụpụta ọrụ aka na-akpasu iwe na nke na-akpasu iwe. Nsogbu ahụ? O yiri ka ọ bụ ihe dị n'ụdị e si ebugharị mbara ala na ọ bụ ihe anyị ga-amata, ee ma ọ bụ ee.
Nke a bụ ihe mere o ji eju m anya ịhụ otuto gabigara ókè, nhoputa maka egwuregwu nke afọ ma ọ bụ iru eru dịka "ọ ga-abụ otu n'ime egwuregwu kachasị mgbanwe na ụlọ ọrụ." Ebumnuche ahụ dị mma, anyị kwenyere, mana mgbe otu afọ na-enweghị ụbọchị dị anya na mbara igwe (Ana m abanye na mmiri 2016) Echere m na ọ bụ oge iji gosipụta ihe ọhụrụ na ihe na-agbaji na ihe a hụrụ. Anyị maara na anyị nwere ike iburu ụgbọ mmiri wee si na mbara ụwa gaa na mbara ụwa ọzọ, ka anyị gaa n’ihe ọzọ. Ọ bụrụ na dị ka ndị agba anyị rapara na nke ahụ ma ghara ịrịọ maka ihe ndị ọzọ, jiri oge anyị na-eto ma na-ewere egwuregwu na mbara igwe, echeghị m na anyị na-egosipụta ezigbo echiche. Remember chetara Kojima? Nwoke ahụ nyere Metal Gear siri ike V Afọ abụọ gara aga, egwuregwu anyị enweghị ụbọchị ma anyị ahụla ọtụtụ trailers na egwuregwu ndị ọzọ. Mgbe ihe egwu dị egwu maka E3 2013, otu n'ime ihe kacha mma m hụtụrụla, atụmanya banyere egwuregwu ahụ rịrị elu mana ugbu a, ọtụtụ ọnwa ka e mesịrị na-enweghị akụkọ dị mkpa, oké osimiri alaghachila na usoro ya ma wedata nchekasị.
Ekwenyesiri m ike na ụdị a oge mgbe ọ na-abịa n'ịkpọsa egwuregwu na igosi "akụkọ" na-ejedebe atụmanya na-emebi emebi ma soro usoro Anglo-Saxon, na ọkụ ya mere mkpa. Na Ọ bụrụ na dịka ndị ọrụ anyị enweghị ọhụụ dị oke egwu na, ihe ọzọ bụ, anyị na-agbachi nkịtị ma soro ndị na-eme mgbagha rụọ ụka, anyị na-aga n'ụzọ na-enweghị isi. Ekwetaghị m na mmụọ nke "T-shirt" ma ọ bụ njikwa, nke ihe niile metụtara igwe anyị họọrọ bụ mmegharị na-aga nke ọma na asọmpi ahụ bụ atụmatụ nkatọ na-eduga n'ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ, karịa ihe niile, bụ echiche tozuru oke na usoro dị ka nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » [Nkwupụta] Mgbatị na nchedo
Nwoke okwukwe nta, ọ bụ ngosipụta nke akụkọ obi ụtọ nke ọhụrụ Zelda, egwuregwu ahụ agaghị ada mbà, enwere m ndị na-agwa m ihe sitere na Japan XD
Zaghachi El Gordo
[Mkpebi] Na nke a 'next-gen' Naughty Dog abughi ihe ijuanya